Yedu Guarantee - MOLONG TATTOO SUPPLY CO., LTD
Nyanzvi Yekutarisisa, Nyanzvi Yekutarisira
MOLONG Hwemhando Yekudzora Kubva Kubva Sourcing kusvika Dhirivhari
Unoshamisika kuti chii chako chachangotenga zvigadzirwa zve tattoo kubva kuChina? KuMOLONG, kunyangwe odha yako isati yaiswa kunyangwe seya wholesaler, mushambadzi, kana mumwe munhu ari kungotarisa kuti atenge gadget yazvino - zvigadzirwa zvedu zvakagadziriswa kuita sisitimu inotarisa uye kuongorora kaviri mhando, kubva pakuwana kusvika pakuendesa.
Pane ino peji:
Kutsvaga zvigadzirwa zvako
Kugadzira yako odha yechigadzirwa
Kuedza zvigadzirwa zvako
Kurongedza zvigadzirwa zvako
Kuchengeta zvigadzirwa zvako
Kugadzirisa Yako Chigadzirwa Kurongeka
Mushure mekutambira mubhadharo wako (Hapana Chazvinoreva Dhipatimendi kana Kubhadhara Kwakakwana), shamwari dzako kuMOLONG chitubu kuti chiite uye wotanga kugadzirisa odha yako.
Vashandi vedu vanoongorora zvirevo zveodha yenyu nekugadzirisa mirairo yenyu. Yako yekutengesa yekutengesa inoramba ichiteedzera kune yako odha.
Kunyangwe vatapi vedu vese vakavimbika vagadziri vezvinhu zvemhando yepamusoro, isu hatitore chero mikana neako chaiwo odha.
Zvese zvigadzirwa zvinopinda nenzira yakazara yeQC maitiro:
Zvese zvinotanga kuendeswa kuInternational Distribution Center uko kwakanyatsodzidziswa timu yekuongorora inoongorora zvigadzirwa zvako zvichibva pamitemo yakasimba uye zvido zvekuongorora. Uye zvatinoda zvakakwirira: chete makumi masere muzana ezviwanikwa zvekutanga zvakasarudzwa zvinopihwa chitambi chedu chekubvumidzwa panguva ino Takatora odha yako here? Tisati tatanga kurongedza, tinoita cheki chakaringana kuti tienzanise maodha nemazvo.
Yedu yeQuality Control timu inozopa chako chigadzirwa kumwe kuongorora, mukati nekunze, zvichitevera zvinyoro protocols uye zvinodiwa.
Kana icho chigadzirwa chikasangana nematanho edu, isu tinochipa yedu chitambi chekubvumidzwa. Izvozvi zvagadzirira kutumirwa kwauri!
Rondedzero yemaitiro edu eQC
Kurongedza Zvako Zvigadzirwa
YEMAHARA kurongedza uye kuendesa timu inomhanya senge wachi wachi, kunyangwe tikadaro isu pachedu. Zvinhu zvinogara zvichiongororwa zvakaringana kune chero zvigadzirwa zvekugadzira uye dhizaini zvisati zvatumirwa kure kuti uve nechokwadi chekuti chinhu chawakadanana nacho online ndicho chinhu chaunogamuchira kubva kukambani yedu. Nhengo dzechikwata chedu dzino tarisa mareti nesimbiso yepakutanga yekutenga pamhepo, uye vozoongorora chigadzirwa chakaburitswa pasherufu kuti vaone kuti chinotarisa nechigadzirwa chakanyorwa.
Zvino, uye ipapo chete, ndipo timu painoenderera mberi nekurongedza iyo odha, yakapetana-kumusoro (uye kazhinji yakawanda) pane yekuputira uye tepi.
Tevere, iri kunze kwemukova mumaoko akachengeteka nevatendi vedu vakavimbika uye vakavimbika.
Kuchengeta Zvako Zvigadzirwa
Kana chigadzirwa chako chikangosiya mikova yedu, tinoramba tichichitevera kusvikira chasvika chako. MOLONG revatengi timu inogara ichishanda kuseri kwezviitiko kugadzirisa zvako zvese zvaunoda uye mubvunzo. Isu tinoteedzera zvaunotumira chaiye-nguva, uye zviripo panguva yako kuti upindure chero mibvunzo, kungave neemail, live chat, kana pafoni. Zvisinei nenyaya yacho, tinogara tiri pano kuzokushandirai.
MOLONG Vanoongorora Kubasa
Redu timu rehunyanzvi rinoshanda risingamire kutenderera nguva yekuona kuti zvigadzirwa zvako zvasvika pamatanho aunoda uye akakodzera.